रबिन्द्रको सम्झना : पोखरामा विभिन्न कार्यक्रम सहित स्मृति सभा हुने – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ फाल्गुन १३ गते मंगलवार ११:५५ मा प्रकाशित
तत्कालिन नागरिक उड्यान तथा पर्यटन मन्त्री स्व. रबिन्द्र अधिकारीको सम्झनामा पोखरामा स्मृति सभा मनाईने भएको छ ।
रबिन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा आगामी १५ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईने आज (मंगलबार) पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिईएको हो ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा संघीय सांसद विद्या भट्टराईले नेकपाका युवा नेता स्व. अधिकारीको सम्झनामा पोखरा सभागृहमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाईने बताए । उनले उक्त दिन गत १० गते ‘क्यानभासमा रबिन्द्र अधिकारी’ कार्यक्रममा तयार पारिएका पेन्टिङहरुलाई प्रदर्शन गरिने बताईन् ।
साथै देशभरका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुले सहभागि हुन पाउने गरी ‘नेपाली राजनीति, युवा र रबिन्द्र अधिकारी’ शिर्षकमा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता समावेश गरिएको जानकारी दिईन् । उनका अनुसार सो प्रतियोगितामा प्रथम हुने विद्यार्थीले २५ हजार द्धित्तिय हुनेले १५ र तृतीय हुने विद्यार्थीले १० हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानका महासचिव धनराज आचार्यले सोही दिन (फागुन १५) पोखरा महानगरपालिकाले स्थापना गरेको स्व. रबिन्द्र अधिकारीको शालिकको अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । उनका अनुसार पोखराको जामुनाबोट स्थित शहिद तथा विभुती पार्कमा निर्माण गरिएको अधिकारीको शालिक बिहान ८ बजे अनावरण गरिनेछ ।
उनले सोही कार्यक्रमका बिच रबिन्द्र अधिकारी अक्षयकोषको घोषणा गरी रकम संकलनका लागि शुभारम्भ गरिने समेत बताए । १ करोड राशीको अक्षयकोष स्थापना गर्ने गरी शुभारम्भ गर्ने बताउदै जापानमा रहेका ईष्टमित्रहरुद्वारा संकलित ४ लाख ७५ हजारबाट थप्दै जाने आचार्यले उल्लेख गरे ।
उनले सो अक्षयकोषबाट गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी र रिसर्चका विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने जानकारी दिए । उनले वर्षमा दुई मुख्य औपचारिक कार्यक्रमको अयोजना गर्ने बताउदै अधिकारीको जन्मोत्सव र स्मृति दिवस मनाउने जानकारी दिए ।
उनले आगामी बैशाख २२ गते स्व. अधिकारीको जन्मोत्सव समारोहका बिच रबिन्द्र स्मृति ग्रन्थ नामक पुस्तक बिमोचन गर्ने समेत जानकारी दिएका थिए । आचार्यले प्रतिष्ठानमा साधारण सदस्य बन्नका लागि ५ सय रुपैया र आजिवन सदस्यका लागि ५ हजार र बिशिष्ट सदस्यका लागि १ लाख रुपैया निर्धारण गरिएको बताए ।
आचार्यले १६ गतेका दिन ‘समाज रुपान्तरणमा रबिन्द्र अधिकारी’ विषयक एक कार्यशालाको आयोजना गरिने समेत बताए । सो कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतले सम्बोधन गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
अपडेट : जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सातै जनाको सनाखत